Kufanotaura Ongororo - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
zvireruke Kufanotaura Ongororo KUGADZIRA nzira yako kune inoitika inoitisa, KUMASHURE kwesarudzo uye DZIDZA zviitiko zvebhizinesi zvinogara zviripo. Mune yanhasi tekinoroji yepasirose nyika, kufambira mberi kwetekinoroji kwakaita kuti kuve nekufambira mberi kweData Analytics kubva kuchinyakare BI mhinduro kune yekufungidzira uye inorondedzerwa analytics mhinduro. Predictive Analytics inobatsira kufanotaura zvichaitika mune ramangwana nemaitiro uye nekukurumidza kuita sarudzo. Ndiyo nzira inonyanya kutsvakwa nemabhizimusi ekuziva iyo "kukosha kutsva" yakavharirwa mukati meruzivo rwavo nekufungidzira zviono, maitiro emangwana nekusvika pazvisarudzo zvirinani zvekusimudzira bhizinesi kukura.
Gartner anotsanangura Predictive Analysis senge chero nzira kuData Mining ine hunhu huna:
1. Kukoshesa kufanotaura (pane kutsanangura, kupatsanura kana kusanganisa)
2.Rapid ongororo yakayerwa mumaawa kana nemazuva (pane emwedzi stereotypical yekutsvagisa dhata)
3. Kukoshesa kukosha kwebhizimusi reruzivo rwakakonzereswa (hapana shongwe yenyanga dzenzou inoongorora)
4. An (kuwedzera) kusimbisa pane nyore kushandisa, nokudaro kuita maturusi kuwanikwa kune vashandisi vebhizinesi
Predictive Analytics inoshandisa matekinoroji akasiyana siyana ekuvandudza mamodheru ekufanofungidzira uye kubatsira kufungidzira maonero nemaitiro.
Kusimbisa izvi zvimiro, mabhizinesi anokwanisa kunzwisisa zvirinani vashandisi vawo uye kutyaira sarudzo yesarudzo yekugadzira yakasarudzika, yakasarudzika uye hunyanzvi ruzivo rwevatengi mukati mehupenyu hwevatengi.
Kuongorora kukuru uye Kufanoongorora
Huru data matekinoroji anoita basa rakakosha mukufungidzira analytics sezvo ivo vachipa kungwara nezveramangwana vachishandisa ruzivo rweBig Data. Big Data matekinoroji anoongorora huwandu hwakawanda hwe data munguva chaiyo, kusanganisira data rakarongedzwa uye risina kurongeka, uye ruzivo rwunobva mukuongorora uku runogona kushandiswa kugadzirisa mashandiro ekushanda, kutsvaga mikana mitsva yemari uye mikana yemakwikwi. Big data analytics software yakagadzirirwa kushanda neakakura madhata mapuratifomu, ayo ane zvivakwa, kuona, kuona, manejimendi, uye analytics layer. Iyo analytics layer ndiyo yepakati chikamu chekuvaka yekufungidzira analytics mhinduro mune hombe dhizaini dhizaini yebhizinesi. Predictive Analytics inoratidza mapatani ane hunhu e Big data kufanotaura zviitiko zvenguva yemberi uye kuongorora kugona kwezviitiko zvakasiyana zvinoita kuti bhizinesi riite sarudzo dzakangwara.
Kune akawanda mabhizinesi anoshandisa Predictive Analytics. Izvi hazvingovabatsire chete kutsvaga mikana mitsva yemusika, kugadzirisa mashandiro emabhizimusi, kusimbisa kuvimbika kwevatengi uye kuchengetedza asi zvakare vanovagonesa kunyatso kugona nzira yevatengi nzira uye kutsvaga mamodheru emabhizimusi matsva. Zvimwe zvinoratidza bhizimusi mabhenefiti ari
1. Wedzera mari yekutengesa
2. Wedzera mwero wekupindura mushandirapamwe
3. Deredza kutengesa mari
4. Deredza mutengi churn
5. Wedzera vatengi kutora, kuchengetedza, uye kuvimbika nezvimwe
6. Zvishandiso Zvekuongorora Zvishandiso:
7. Zvishandiso zvakasiyana siyana zvinoshandiswa mukufungidzira modelling uye analytics. Mamwe mazita evatengesi anozivikanwa mumusika ndeaya:
R, Apache Spark, HP Haven Predictive Analytics, Actian Vortex Express, Konstanz Ruzivo Miner.
Yekukurumidza nguva-yakasungirwa kufungidzira uye kufanofungidzira nekutora sarudzo pane zvazvino zvichangoburwa uye zvenguva pfupi njere
Nzwisisa mugumo chinangwa chePredictive Analytics yesangano.
Chengetedza vashandisi vebhizinesi vanoita neizvo Predictive Analytics inogona kuvabatsira kuti vabudirire.